စင်ကာပူရောက် မြန်မာမိသားစု ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » စင်ကာပူရောက် မြန်မာမိသားစု ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ
စင်ကာပူရောက် မြန်မာမိသားစု ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ
Posted by manawphyulay on Mar 30, 2012 in Events/Fundraise, Society & Lifestyle |7comments
စင်ကာပူရောက်နေသူများအတွက် သတင်းပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ….
1st April ဆိုတော့ April Fool တော့မဟုတ် လောက်ပါဘူးနော်။ သွားမော ကြီးဖြစ်နေမှာ ဆိုလို့
မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါက သင်္ကြန်အကြိုလုပ်ကြတာများတယ်။
သွားပြိုင်အုံးမှပဲ၊ အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် တအိမ်လုံးက ကောင်း လိုက်တာ ဆိုပြီး အားပေးကြတယ်။ ကောင်းမှာပေါ့ ကောင်းပြီးသား ခင်ထွေးရီတို့ ဒေါ်ချိုတို့ နန်းသပြေတို့ကို ကိုယ်က တူနာဘူးလေး ဖောက်ထည့်၊ ကြက်ဥလေး ထည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ချက်သလိုလို အိုက်တင်ဖမ်းထားတာကိုး။
အဟိ .. ကထူးဆန်းရဲ့ အလွဲ ဒီခြင်္သေ့ကျွန်း မုန့်ဟင်းခါး ပွဲဆိုလို့ ပြန်သတ်ိရမိလို့ပါ.
Once uponatime တုန်းက သင်္ကြန်ပွဲ အတွက် ခြင်္သေ့ကျွန်း မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးလည်း ပါတာပေါ့ ။ အဲ့ဒီမှာ မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြထားပါတယ် ။ ငှက်ပျောအူ အစီမ်းကိုပုဂံ နဲ့ထည့်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်ထားပါတယ် ။
စလုံး တရုတ်ကြီး တစ်ယောက်က အဲ့ဒါ စားလို့ ရလားဆိုပြီး ကထူးဆန်းကို မေးပါသည်။ ကထူးဆန်းက လည်း ပြီးလွယ်စီးလွယ် ရက်စ်လို့ ဖြေမိလိုက်ပါတယ်။ ကထူးဆန်းကတော့ မုန့် ဟင်းခါး ဟင်းချိုထဲပါတာကို ရည်ညွှန်းလိုက်ပေမဲ့ တရုတ်ကြီး က ကောက်ပြီး သူ့ ပါးစပ်ထဲ အဲ့ဒီ့ အစိမ်းကြီး ထည့်လိုက်ပါကော.. ပြီး ၀ူးဝူးဝါးဝါးထွီ ထွမ် တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ကထူးဆန်းကို ဒေါသ တကြီး ကြည့်ကာ ကထူးဆန်း တောင်းပန်တာလည်း မရဘဲ ပြန်သွားတာ အမှတ်ပြန်ရမိပါကြောင်း ..
ဖြစ်ရမယ် ကထူးဆန်းတို့လုပ်လိုက်ရင် အလွဲကြီးပဲ။ ဟိုက စလုံးတရုတ်ကြီးက မဆဲသွားတာတောင် ကံကောင်း ဒီကောင် ငါ့ကို မသိဘူးဆိုပြီး လိမ်ပြောတယ်ဖြစ်နေဦးမယ်… ပျော်စရာတော့ ကောင်းမယ်နော်… ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသင်္ကြန်တို့ ရခိုင်သင်္ကြန်တို့ လုပ်ကြတယ်။ နောက်မှသွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ပေးဦးမယ်။
tonton fatty says:
စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေ ပျော်ရတာပေါ့နော်… ပျော်စရာ အလွန်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ သွားချင်လိုက်တာ။